“Shoko raMwari Wedu Richagara Nokusingagumi” — RAIBHURARI YEPAINDANETI yeWatchtower
w17 September pp. 18-22
Nharireyomurindi Yokuzivisa Umambo hwaJehovha (Yekudzidza)—2017
Unofanira Kudzidzira chiHebheru nechiGiriki Here?
4 Mitauro inochinja nekufamba kwenguva. Zvinorehwa nemashoko zvinogona kupedzisira zvachinja zvachose. Zvimwe unogona kufunga nezvekumwe kuchinja kwakaita mutauro wako. Izvi ndizvo zvakaitikawo kuchiHebheru nechiGiriki, mitauro yakashandiswa pakunyora zvikamu zvakakura zveBhaibheri. ChiHebheru nechiGiriki zvemazuva ano zvakasiyana zvikuru nezvaitaurwa panguva yakanyorwa Bhaibheri. Saka vanhu vakawanda vanoda kunzwisisa Shoko raMwari, kunyange vaya vanoziva chiHebheru nechiGiriki chemazuva ano, vanotofanira kuverenga Shoko raMwari rinenge rakashandurwa. Vamwe vanofunga kuti vanofanira kudzidza chiHebheru nechiGiriki chekare kuitira kuti vakwanise kunzwisisa Bhaibheri zviri nani. Asi izvozvo zvingasabatsira sezvavanofungidzira.* Zvinofadza kuti Bhaibheri kana kuti zvikamu zvaro zvakashandurirwa mumitauro inenge 3 000. Zviri pachena kuti Jehovha anoda kuti vanhu ‘vemarudzi ose nemadzinza nemitauro’ vawane mukana wekubatsirwa neShoko rake. (Verenga Zvakazarurwa 14:6.) Izvozvo hazviiti here kuti uwedzere kuva pedyo naMwari wedu ane rudo uye asingasaruri?—Mab. 10:34.
5 Mitauro yakashandurirwa Bhaibheri inochinjawo nekufamba kwenguva. Shanduro yeBhaibheri yainzwisisika zviri nyore payakatanga kubudiswa ingapedzisira isisanyanyi kubatsira nekufamba kwenguva. Funga nezveimwe shanduro yeBhaibheri yeChirungu inonzi King James Version yakatanga kubudiswa muna 1611. Yakava imwe yemaBhaibheri eChirungu anofarirwa nevakawanda, uye ine zvayakachinja pamutauro weChirungu.* Asi King James Version yakashandisa zita raMwari kashoma. Yakashandisa zita rekuti “Jehovha” mumavhesi mashomanana uye yakashandisa shoko rekuti “ISHE” rakanyorwa nemabhii makuru mune mamwe mavhesi muMagwaro echiHebheru aiva nezita raMwari pakutanga. Parakazoprindwa makore akatevera rakanga rava kushandisawo shoko rekuti “ISHE” rakanyorwa nemabhii makuru mune mamwe mavhesi muMagwaro echiKristu echiGiriki. Saka King James Version yakaratidza kuti zita raMwari raivamo mune inonzi nevanhu Testamende Itsva.
14 Kukurukura kuti Bhaibheri rakaramba sei riripo makore ese aya kunosimbisa kutenda kwedu uye kunoitawo kuti tiwedzere kuda Jehovha.* Asi nei akatipa Shoko rake? Uye nei akavimbisa kuti raizoramba riripo? Imhaka yekuti anotida, uye anoda kutidzidzisa kuti tibatsirwe. (Verenga Isaya 48:17, 18.) Saka zvakakodzera kuti tidewo Jehovha uye titeerere mirayiro yake.—1 Joh. 4:19; 5:3.
Ona nyaya inoti “Unofanira Kudzidzira chiHebheru nechiGiriki Here?” iri muNharireyomurindi yaNovember 1, 2009.
Madimikira akawanda eChirungu akatanga neKing James Version.
Ona bhokisi rakanzi “Zvionere Wega!”